IHultsfred Strandcamping | Vakashela uHultsfred
umphetho » yokuhlala » Camping » UHultsfred Strandcamping
Lapha uhlala ngombono omuhle weLake Hulingen! Usondele ebhishi, izinsiza kanye nekhefi. Ukuhamba ibanga elingamakhilomitha amabili ugudle lo mgwaqo kukuyisa esikhungweni saseHultsfred. Izindlwana nezindawo zokukhempa zamakharaveni, izindlu zezimoto namatende abheke echibini Njengombhede wesipiliyoni esihle!
Lapha izinja zinezindawo zazo zokugeza izinja lapho zingathatha khona idiphu.
Ngaphezu kokubhukuda usuka ebhishi, kunezimoto eziqashiwe zokuqasha ukuhlola indawo yokukhempa. Kukhona nezikebhe, ama-kayaks kanye ne-SUP ukuhlola ichibi noma amabhayisikili ukuthatha uhambo oluya enkabeni. Kulabo abathanda ukudoba, iHulingen iyindawo enhle kakhulu yokudoba - lapha iyabamba!
Sukuma Up Paddleboard
Bhuka futhi uqashe ama-kayak endoda eyodwa noma ama-kayak amabili-amadoda futhi uhlole iLake Hulingen. Kufanele bonke abaqalayo nabagwedli abanolwazi.
Qasha isikebhe usuka endaweni yokwamukela izivakashi uphinde uhlole umfula ongena enkanjini. Kuyajabulisa kuyo yonke iminyaka!
Letha iqembu lakho labangane noma lomndeni bese uzulazula echibini ngesikebhe esinyakaziswayo. Izikebhe ezihamba ngezinyawo ziqinile futhi zizinzile, ungabhukuda kuzo noma kungani ungalethi ipikinikini njengohambo?
Hlola indawo yamatende emotweni yemoto. Kunemigwaqo eminingana yamatshe oyibhuqu onganyathela kuyo, uma uthola omama nobaba ungaphenduka ujike ube yipaki labantu eliseduze nekhempu!
Amafolkparkvägen 10, 577 36 I-Hultfred, Sweden
4.3 aphume ku-5.0
365 izibuyekezo ku-Google
4/5 izinyanga 2 ezidlule
Ukuzola okuhle futhi kumnandi, ngingathanda ukuya lapha futhi.
5/5 izinyanga 3 ezidlule
Indawo enhle.abasebenzi abahle kakhulu, ama-waffles amahle anama-skagenröra mums, nje ufisa ukuthi amahora avulekile kufanele abe made endaweni yokudlela (mhlawumbe ngoLwesihlanu nangoMgqibelo?) Inani elingu-320 ngobusuku obulodwa lwe-motorhome lilungile ... Sizojabula ukubuya .
Indawo yokukhempisha ethokomele kakhulu. Izindawo ezinhle nabasebenzi abanobungane. Okumele sikwenze, sizobuya.
5/5 izinyanga 6 ezidlule
Njengoba kube kanye nje lapho besingathatha ikhefu uma kuyisimo sezulu sasehlobo, sithathe abakwa-camper sayisa kule khempu evelele. Sithandeke ngokuphelele ngendawo, ukubuka, okujwayelekile kanye nombhangqwana omuhle wababungazi. Ukuhleleka nokuhleleka, izixazululo zobuchwepheshe ezihlanzekile nezinhle nezihlakaniphile ukwenza kube lula kithina sonke. Izindawo ezinkulu zokukhempa. Manje ngesikhathi sangaphambi kwesizini besinokunethezeka kokukwazi ukukhetha indawo yethu ngokukhululeka ngokuphelele. Sakhetha indawo yethu buqamama nendlu yesevisi, kodwa ngakolunye uhlangothi sasinamanzi esigxotsheni sikagesi. Ukunethezeka engingakaze ngikubone ngaphambili ekamu. Okunye ukunethezeka kwakungamakhekhe asanda kubhakwa ekuseni (kusukela ngo-9 ekuseni). Ukuze ukwazi ukuphuza ikhofi, noma esinye isiphuzo, futhi udle ama-waffles abo amakhulu emgodini opholile wokhuni kuyinto enhle ehlobo kanye no-ayisikhilimu othambile no-ayisikhilimu. Izinja zivunyelwe futhi bekumnandi ukuba nendawo yakho yokugeza inja. UPaul noMarina
Abasebenzi abahle kanye nekhempu enhle kakhulu. Izindawo ezinhle zokukhempa. I-waffle yabo yinhle kakhulu. Sizobuya
2021-06-21T10:38:22+02:00Camping, Amakhefi, UKayak|